Aflaanta aad ka daawan karto YouTube -ka BILAASH (iyo sharci) | I sii wakhti firaaqo
Aflaanta aad ka daawan karto YouTube -ka bilaash (oo sharci ah)
Gabriela moran | | cine, Shineemada caadiga ah, Shineemo noocyada
YouTube -ku wali waa mid ka mid ah aaladaha ugu waaweyn uguna isticmaalka badan kaas oo u shaqeeya shabakad bulsho. Isticmaalayaasha guud ahaan waxay wadaagaan fiidiyowyo, sidaa darteed waxaa suurtogal ah in aad awoodo in aad daawato filimada buuxa oo bilaash ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xuquuqda daabacaadda iyo qawaaniin gaar ah oo xaddidaya waxa ku jira bogga si uusan ugu dhicin carqalado sharciga. Markan Waxaan soo bandhigayaa qaar ka mid ah filimada aad ka daawan karto YouTube -ka lacag la’aan iyo sharci iyo inay leedahay shirqoolo aad u xiiso badan. Haddii aad taageere u tahay filimada caadiga ah, ma joojin kartid akhrinta waxyaabaha aan diyaariyey!
In kasta oo ay run tahay in aaladaha qulqulka ay qayb weyn ka yihiin suuqa dhexdooda adeegsadayaasha, YouTube waxay u taagan tahay ikhtiyaar bilaash ah oo leh ikhtiyaarro aan laga heli karin aaladaha kale. Waxaan ka heli karnaa wax walba laga soo bilaabo dokumenteriyada ilaa sheekooyinka filimka weyn! Waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhrinta si aad u ogaato waxa ugu wanaagsan ee YouTube ku leeyahay arrin filimada muuqaalka caadiga ah ee aan ku xirnayn xuquuqda daabacaadda.
Ikhtiyaarada aan soo bandhigayaa waxay u dhigantaa wakhtigii tiknoolajigu aad uga fogaa waxa aan maanta naqaanno: waa madow iyo caddaan qaarkoodna waxay u dhigmaan filimo aamusan. Si kastaba ha ahaatee lTayada sheekooyinku aad bay u sarraysaa oo qiimo dhaqan oo aan la soo koobi karin. Xulashadu waxay muujineysaa filimaan khuseeya jilayaasha sida Charles Chaplin, iyo sidoo kale filimkii ugu horreeyay ee vampire, mid ka mid ah filimada hormuudka u ah zombie ayaa sidoo kale la soo bandhigay, iyo sidoo kale sheekooyin aragti fog leh mustaqbalka iyo sheekooyin waalan oo ku lug leh gacan ku dhiiglayaasha iyo hypnosis.
1 Dahabkii orod
2 Alarm ee expresso (Marwada way baaba'day)
3 Nosferatu: heeso naxdin leh
4 Magaalada Metropolis
5 Habeenkii Dhimashada Noolaha
6 Mashiinkii Jeneraalka
7 Golaha Wasiirrada Dr. Calgary
8 Ma jiraan filimo badan oo aad si sharci ah uga daawan karto YouTube -ka?
Waxaa la soo saaray 1925kii waana jilaaga filimka jilaaga ah ee Charles Chaplin, oo waliba qoray, agaasimay oo soo saaray filimka. "The Golden Rush" waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah shaqooyinkiisii ​​ugu caansanaa wuxuuna helay laba magacaabid Oscar markii nooca codka la sii daayay 1942.
Dooddu waa ku salaysan tuman raadinaya dahab waxayna u guureen Klondike ee Kanada halkaas oo tiro aad u badan oo alaab qaali ah loo malaynayo inay jiraan. Jidka, wuxuu la yaabay duufaan ku qasbeysa inuu magangelyo ka raadsado guri laga tagay oo ah hoyga dilaaga halista ah! Qaddarku wuxuu soo geliyaa martida saddexaad guriga iyo duufaanka dartiis midna meesha kama bixi karo.
Saddexda xaraf waxay bartaan inay ku wada noolaadaan waxay ka bixi karaan guriga. Dhowr maalmood ka dib, duufaanku way joogsataa mid walbana wuxuu ku sii socdaa jidkiisii, meeshii ugu dambaysay ee uu lahaa ujeeddo isku mid ah: inuu helo macdanta dahabka ah!
Inta lagu gudajiro waddada uu halyeeygeena safrayo, wuxuu la kulmaa Georgia. Haweeney qurux badan oo uu jaceyl u qaado laakiin ugu dambeyn uu kala tago. Sheekadu waxay noo sheegaysaa dhowr dhacdooyin oo ay tahay in jilayaashayagu ay soo maraan kahor intaanay gaarin yoolkoodii hore. Waa sabab in la xuso waxqabadka aan fiicnayn ee Chaplin oo had iyo jeer ku dhiirrigeliya dhagaystayaasha kaftankiisa gaarka ah ee lagu garto filimadiisa madoow iyo caddaanka ah.
Dhammaadka sheekadu waa faraxsan tahay, maadaama jilaaga uu helo waxa uu doonayo. Si kastaba ha ahaatee aakhirka wuxuu garwaaqsan yahay in waxa uu runtii gaadhay uu ka muhiimsan yahay dahabkii uu raadinayay.
Alarm ee expresso (Marwada way baaba'day)
Riwaayad cajiib ah oo heer sare ah oo ay ka buuxdo shaki ayaa ah qorshaha cinwaanka laga hadlayo. Waxaa lagu sii daayay shaashadda weyn 1938 -kii New York Times ayaana ku qiimeysay filimka ugu wanaagsan sannadkaas. Waa filim Ingiriis ah oo uu agaasime ka yahay Alfred Hitchcock, sheekadu waxay ku salaysan tahay sheekada "The wheel spin." Dadka sida weyn u jilaya waa Margaret Lockwood, Paul Lukas, Basil Radford Redgrave iyo Dame May Whitty.
Sheekadu waxay noo sheegeysaa safarka dib ugu noqoshada guriga a laba qof oo rakaab ah oo ku soo noqonaya London, gurigoodii. Cimilada oo xun awgeed tareenka ayaa lagu qasbay inuu istaago si rakaabka loo badbaadiyo; lammaanaha safarka ahi waxay ku hoydaan magaalo fog. Qaybta xiisaha leh waxay bilaabmaysaa marka marka ay ku noqdaan tareenka oo ay ogaadaan in qof rakaab ah la waayay. Safarkii aan fiicnayn ee gurigu wuxuu ku sigtay inuu isu rogo riyo xun!
Rakaab walba wuxuu noqdaa tuhun. Kobcinta sheekadu waxay daaha ka qaadaysaa siraha xiisaha leh ee in ka badan midkood….
Nosferatu: heeso naxdin leh
Haddii aad tahay qof jecel vampire, waa inaad aragtaa! Nosferatu waa filimkii ugu horreeyay ee la xiriira sheekada dhabta ah ee Dracula oo uu qoray Bram Stoker. In kasta oo xaqiiqda ah in uu jiray muran iyo qaar ka mid ah arrimaha sharciga ee agaasimaha Friedrich Wilhelm Murnau oo ka dhan ah dadka dhaxlay sheekada asalka ah, filimkan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay bilowga filimada vampire -ka ugu wanaagsan taariikhda nooca filimka.
Lamaane da 'yar ayaa sheekada ku jilaya, ninka magaciisu yahay Hutter waxaa loo diraa Transylvania xagga ganacsiga si uu u xiro heshiiska Count Orlok. Markii lagu rakibay hudheelka halkaas, Hutter wuxuu ogaadaa dukumiinti macabre ah oo ka hadlaya vampires oo ka dhigaya mid xiiso leh. Markii dambe wuxuu tagaa qalcadda tirinta halkaas oo uu kula kulmo milkiilaha xun.
Maalinta ku xigta booqashadaada qalcadda, Hutter wuxuu qoortiisa ka helaa laba calaamadood kaas oo la xiriira qaniinyada cayayaanka. Muhiimadda weyn muu siin dhacdada ilaa uu dwuxuu ogaadaa inuu joogay vampire dhab ah, Tiri Orlok!
Calaamadaha qoortiisa ayaa noo reebaysa su'aasha ah: Hutter hadda ma yeelan doonaa haraad dhiig oo ay xaaskiisu damacdo?
Waa filim aamusan oo asal ahaan Jarmal ah oo la sii daayay 1926 iyo in waxay kor u qaadday xaqiiqada adduunka 2026 yacni 100 sano kadib!
Filimku wuxuu inoo sheegayaa wax ku saabsan kala saaridda dabaqadaha bulshada iyo takoorka in ay u dhaxayso labadooda halka dabaqadda shaqaaluhu ku nooshahay xaafadaha dhulka hoostiisa ayna ka mamnuuc tahay in ay dibadda u baxaan. Daal takoor iyo cabudhin iyo kicinta robot, lShaqaaluhu waxay go'aansadaan inay ka soo horjeedaan kuwa mudnaanta leh. Waxay ku hanjabeen inay burburin doonaan magaalada iyo nabadda ay ku jirto dabaqadda mudnaanta leh ee lagu helay waxgaradka iyo dadka awoodda dhaqaale leh.
Waxaan helnaa laba qof oo waaweyn, hoggaamiye ka tirsan dabaqad kasta oo bulsheed, sida jilayaasha iyo geesiyaasha. Waxay daryeelaan cheshiiyaan heshiisyada ku salaysan ixtiraamka iyo dulqaadka.
Waa arrin aad u xiiso badan habka loo soo bandhigay mustaqbalka ee maanta aaney sidaa u sii fogeyn.
Metropolis ayaa ka kooban filimkii ugu horreeyay ee la guddoonsiiyo qaybta "Xusuusta Adduunka" oo ay bixisay UNESCO. Aqoonsiga waxaa sabab u ah qotada dheer ee arrimaha bulshada looga hadlay.
Habeenkii Dhimashada Noolaha
Waa filim argagax leh oo la sii daayay 1968 -kii waxay beddeshay nooca filimada diiradda saaraya zombie. Waxaa dadka qaarkiis u arkaan inuu yahay filimka ugu wanaagsan qaybtaan sababtuna tahay doorka “dhintay dhintay” ee ku dhexjiray dhagarta iyo inay si weyn u saameysay filimmada la sii deyn doono intaas ka dib. Guusha uu abuuray mawduucan awgeed, waxaa la soo saaray sagaal cutub. Taxanaha ayaa la sii daayay sanadihii 1978, 1985, 2005, 2007 iyo 2009.
Filimka furitaanka, oo laga heli karo Youtube -ka, wuxuu ku saabsan yahay koox dad ah oo naftooda ku go'doomay nooc ka mid ah beerta una dagaallama naftooda ka dib markii koox dhintay ay dib u soo noolaadaan. Sheekadu waxay ku bilaabmaysaa laba walaalo ah oo meeshaas gabaad ka dhigta kuwaas oo ogaanaya inaysan kaligood isku dayin inay badbaadaan.
Waqtigeedii, filimku wuxuu argagax ka dhex abuuray dhagaystayaasha sababta oo ah rabshadaha iyo muuqaallada aan fiicnayn ee ay fuliyeen zombies -ku.
Buster Keaton waa jilaa caan ah laga soo bilaabo xilligii Charles Chaplin. Waa filim aamusan, madow iyo caddaan ah oo iska leh nooca majaajilada. Waa la qabsiga dhacdo dhab ah oo dhacday intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye ee Mareykanka 1862 -kii.
Taariikhdu waxay noo sheegaysaa noloshii Johnnie Gray, darawal tareen ee shirkadda Western & Atlantic Railroad. Wuxuu xiriir jaceyl la leeyahay Anabelle Lee, oo ka codsatay inuu ka mid noqdo ciidanka marka uu dagaal dhaco Si kastaba ha ahaatee, jilaheena lama aqbalo maxaa yeelay waxay u tixgeliyaan xirfadihiisa farsamo yaqaanka mid wax tar leh. Markii la ogaaday diidmada ciidanka, ANabelle wuxuu ka tegey Johnnie sidii fulay.
Waxay qaadataa wakhti in lammaanihii hore uu mar kale ku kulmo dhacdo nasiib darro ah oo naftooda halis gelisa.
Waxay ku habboon tahay in la xuso in filimka aan si wanaagsan loo soo dhaweyn intii lagu guda jiray bandhiggiisii ​​1926 -kii, waxay ahayd ilaa sannado ka dib inuu caan noqday oo loo tixgeliyo mid ka mid ah doorarkii ugu fiicnaa ee jilaa waligiis ciyaaray.
Golaha Wasiirrada Dr. Calgary
Waxaan ku sii wadnaa nooca aamusan iyo madow iyo caddaan. Golaha Wasiirrada Dr. Calgary waa filim argagax leh oo Jarmal ah oo la sii daayay 1920. Lsheekadiisu waxay ka sheekaynaysaa dilalkii maskax -mareenka oo awood u leh in uu is -kaydiyo oo u adeegsada qofka hurda si uu u galo dambiyadaas!
Dr. Calgary waa maskaxdii ka faa’ideysata xirfaddiisa iyo daciifnimada qofka lugeeya si uu u soo bandhigo nooc ka mid ah bandhigga oo dadka deegaanka ku maaweeliya. Sheekada ayaa dib loo milicsadaa waxaana ka sheekeeyay Francis oo ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn sheekada.
Guud ahaan, sheekadu waxay ku wareegsan tahay qaab muuqaal mugdi ah sababtuna waa xaqiiqda in goobtu ka hadlayso mawduucyada la xiriira ciyaaraha waalida iyo maskaxda. Filimkan waxaa loo arkaa inuu yahay shaqada ugu weyn ee shineemada muujinta Jarmalka. Qoraalka filimka wuxuu ku saleysan yahay waaya -aragnimada shaqsiyeed ee hal -abuurayaasha: Hans Janowitz iyo Carl Mayer. Labaduba waxay ahaayeen nabad -doon waxayna isku dayeen inay si gaar ah u muujiyaan awoodda ay dowladdu ku adeegsatay ciidanka. Si taas loo gaaro, waxay abuureen Dr. Calgary iyo qofka hurda: iyagoo matalaya dowladda iyo ciidanka siday u kala horreeyaan.
Waxaa hubaal ah in uu yahay riwaayad maskaxeed oo ku cayaarta maskaxda daawadayaasha oo la yaab leh sida ay sheekadu u soo ifbaxday.
Ma jiraan filimo badan oo aad si sharci ah uga daawan karto YouTube -ka?
Dabcan way jirtaa! Cinwaanada aan soo bandhigay waa dhadhan yar oo ka kooban waxyaabaha sharciga ah ee aan heli karno. Markan waxaan diiradda saaray filimada caadiga ah ee xiisaha weyn u kiciyay waqti ka dib. Dheeraad ah, waxaa jira dokumentiyo hadda jira iyo filimaan la heli karo oo aan ugu raaxaysan karno si sharci ah oo bilaash ah.
Ma jecli inaan macsalaameeyo anigoon marka hore xusin inay jiraan tabaha aan la tirin karin si aad uga hesho waxyaabaha bilaashka ah aaladaha sida YouTube, si kastaba ha ahaatee, aan xasuusnaano in badan oo ka mid ah dhaqamadan waa sharci darro. Aan isku dayno inaan wax ku biirinno adduun ka wanaagsan in laga fogaado falalka anshaxa ka baxsan ee ku xadgudba xuquuqda daabacaadda taasina waxay sidoo kale mudan tahay shaqada ku lug leh samaynta filimada.
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysato xulashada filimada aad ka daawan karto YouTube si sharci ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » cine » Aflaanta aad ka daawan karto YouTube -ka bilaash (oo sharci ah)
La kulan mootada duulaysa ee Back to the Future